မုန်ညင်းစေ့ကိုယုံကြည်ခြင်း | Apg29
အများအပြားကယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့ utopian နှင့်ချက်များမရရှိတစ်ခုခုကြောင်းသဘောထားရှိသည်သောဘုရားသခငျ၏တလူတို့တွင်လည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ရှိုးပွဲအဘယ်အရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောင်းကိုအညီကျမ်းစာလာသည်ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ကမျြးစာကိုယုံကြည်ခြင်း, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယူရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းအများကြီးကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ အတော်များများကခရစ်ယာန်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပိုကြီးနှင့်ပိုမိုအားကောင်းရရှိသွားတဲ့ဒီတော့အကြောင်း, ထိုသူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုကြီးထွားချင်ပါတယ်။ ဒါဟာတွေ့ကြုံခံစားဖို့အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အများအပြားကယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့ utopian နှင့်ချက်များမရရှိတစ်ခုခုကြောင်းသဘောထားရှိသည်သောဘုရားသခငျ၏တလူတို့တွင်လည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ရှိုးပွဲအဘယ်အရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောင်းကိုအညီကျမ်းစာလာသည်ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တဖန်ဟေဗြဲအတွက်ဖတ်ပါ။ 11: 1:
"ဒါပေမယ့်ယုံကွညျခွငျးကိုမျွောလငျ့သောအရာတို့ကိုတစ်ခံယူချက်, မတွေ့မမြင်အရာအထောက်အထားဖြစ်၏။ "
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးယူဆချက်တစ်ခုယူဆချက်သို့မဟုတ်တဦးတည်းအတော်လေးသေချာမသိကြောင်းယူဆဘူး။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏စိတ်နှင့်အတူအမှုအရာရိပ်မိပုံကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ, နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။
မကြာခဏကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေ: "။ ငါဒါဒါသည်ထင်ပေမယ့်ငါမသေချာဘူး" ဤတွင်ယူဆချက်, ဖြစ်ကောင်းတစ်ကွေးမြားသို့မဟုတ်ထင်ကြေးလာပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုလုံးဝလုံခြုံလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခု, အစိုင်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များနှင့်မမြင်နိုင်သောအရာကို၏အမှန်တရားရဲ့ခံယူချက်အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းပိုဒ်3၌ဤ says:
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် get ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်နားလည်မှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ တဦးတည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားလည်နိုင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအရာသည်မမြင်နိုင်နောက်ကွယ်ကအဖြစ်မှန်သို့မျက်စိနှင့်ရောက်ရှိဖို့မြင်နိုင်သောကမ္ဘာကြီးထက်ကျော်လွန်တတ်၏။ ကျနော်တို့ဖတ်ပါ: "ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ " ဒါဟာအမှန်တရားပါပဲ။ ဒါပေမယ့်နောင်တမယူလူများကလူအပေါင်းတို့အားလှည့်နေကြပြီး, says: "စိတ်ကိုတဆင့်ကျနော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ " ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံနှင့်သာမန် "ဘုံအသိ" ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုပြီးယုံကြည်ချက်, ပိုကြီးနှင့်ပိုမိုအားကောင်းယုံကြည်ခြင်း၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲ ကမျြးစာက says:
ဘုရားသခငျ့စကားလုံးသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးထွင်းသိမြင်သူတစ်ဦးတရားဟောဆရာများကဝတ်ဆင်သောအခါကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့သင်ကြားမှုကိုနားထောင်သည့်အခါ, ယုံကြည်ခြင်းအားလာသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတွက်သမ္မာကျမ်းစာကိုမကြာခဏစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်လာသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့လိမ်းရန်ဝေးအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကမျြးစာကဆရာမပါပဲ။ ဘုရားသခင့ပြောပါတယ်များအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏စာဖတ်ခြင်းမှာကအထူးသဖြင့်ကတိတော်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်, သူတို့ကသူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူရရှိထားသူကတိပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသယ်ဆောင်ဘို့သင်, တကယ်ကျမ်းစာထဲမှာဂတိတော်တို့ကိုမှတွယ်ကပ်ရန်ရှိသည်။
အာဗြဟံသည်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့ခဲ့သူတစ်ဦးသူဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုတစ်ဇီဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့သည့်သား၏ဂတိပေးထားခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်မဖြစ်နိုင်မြင်နေတုန်းပဲဒါဟာလုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့ကြောင်းယုံကြည်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ nuBibeln, ရောမမြို့ကနေဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။ 4: 18-22:
အဘယ်သူမျှမမြော်လင့်စရာရှိပေမဲ့ 18 "အာဗြဟံဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အတွေး, ဒါကြောင့်သူကဆိုသည်အဖြစ်ကိုသူ, များစွာသောလူမျိုး၏အဘဖြစ်၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့သည် '' သင်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဒီတော့မြောက်မြားစွာ။ '
19 ထို့ကြောင့်အာဗြဟံသည်သူတရာတစ်ဦးအကြောင်းကိုနှစ်အရွယ်မှာပင်သော်လည်းသူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုမနိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာနှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မျှတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကြီးနှင့်သူ၏ဇနီးသော်လည်းစာရာသားသမီးနိုင်ခဲ့ဘူး, အခုကပဲအသက်ကြီးလွန်းခဲ့ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။
သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ့ကိုအစွမ်းသတ္တိကို ပေး. သူသညျဘုရားသခငျဂုဏ်ပြုဘို့ 20 သူသညျဘုရားသခငျ၏ဂတိမှာမယုံကြည်သောအတွက်သံသယဘူး။
22 ထိုသို့ဖြောင့်မတ်အဖြစ်သူ့ကိုမှအသိအမှတ်ပြုခံရ၏။ "
ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အာဗြဟံကိုယူလျှင်, ငါတို့သည်ကြီးထွားလာယုံကွညျခွငျးအတှကျတစ်ဦးမင်္ဂလာရှိသောအခွင့်အလမ်းကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါ 1917 ဘာသာပြန်ချက်ထဲမှာဖတ်:
" ... သူကအစားသူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုအတွက်အားကောင်းရှိ၏ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း ... "
ဂုဏ်အသရေမှဘုရားသခငျသညျပိုမိုအားကောင်းယုံကြည်ခြင်းတရားကိုရဖို့ရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ထို့နောက်နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာသခင်ဘုရား၏ဘုန်းအသရေ။ ကကျဟရှောယအတွက်ကပြောပါတယ်သကဲ့သို့သငျမလုပျနိုငျသညျ။ 29:13 (nuBibeln):
"ဒီလူတွေကသူတို့စကားနဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်ဖြင့်ဂုဏ်အသရေသည်ငါနှင့်အတူငါ့ကိုချဉ်းကပ်ပေမယ့်သူတို့နှလုံးဝေးငါ့ထံမှဖြစ်တယ်, ဘုရားသခင်၏သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သာယောက်ျားများ၏လေ့လာသင်ယူနေပါတယ်။ "
ဒါဟာနှလုံးအတှေး, စကားလုံးများနှင့်အကျင့်တို့နှင့်, သူ၏အသက်တာနှင့်အတူဘုရားသခင်အားချီးမြှောက်ရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ထံသို့မရောက်ရ။ ဒါဟာအာဗြဟံသည်ကိုပြု၏။
တစျခြိနျတှငျတပညျ့တျောတို့သသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန့်ပွားဖို့ယရှေုကိုမေးခဲ့တယ်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပှား" လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ ယရှေု, Matt သူတို့ကိုပြန်ပြော၏။ 17:20:
" ... ဧကန်အမှန်ငါအသင်တို့သည်မုန်ညင်းစေ့ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှိပါက, သင်သည်ဤတောငျပျေါမှပြောပါရှိဖို့ဒီကနေရွှေ့နှင့်ရွှေ့မည်နိုငျသညျ, သငျသညျဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ။ အလျှင်းသင့်အဘို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်လိမ့်မည်"
အဘယ်အရာကိုမျှဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ဂတိထားတော်, ဒါမှမဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏သားသမီးများ၏အကျိုးအတွက်မုန်ညင်းစေ့ကဲ့သို့သောယုံကွညျခွငျးရှိသောသူတို့အဘို့မဖြစ်နိုင်ပေ။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့ထင်ရှားစကားလုံးနှင့်သူ၏အလိုတော်မှာသူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုယုံကြည်မှုထားတော်မူ၏။
"အမှန်အကန်ငါငါ့ကိုယုံကြည်သောသူမူကားလည်းငါပွုသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်, သင်ဖို့ဆိုရမည်မှာ, ငါသည်ငါ၏ခမညျးတျောကိုသှားကြောင့်ဤသူမူကား, ပြုကြလိမ့်မည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်အကျင့်။ "
သူတို့ကသူတို့နှင့်ပြုမိထက်ကိုတောင်ပိုမိုကြီးမားသည့်အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ယရှေုအတွက်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူအပေါင်းတို့အဘို့တတ်နိုင်သောဤနည်းလမ်းများ။ က Utopia, ကနျ့သတစ်ခုခုရှိပါသလား? အားလုံးကတော့မှာ! ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်ကနေအကြိုးပွုနိုငျလေ့လာစေ့စေ့မဩဝါဒပေးခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားအပြည့်ဖြည်တရားဟောဆရာကိုနားထောင်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။